Aynu caawinno walaalkeen Weriye Khadar Macallin Deeq | Somaliland Post
Home Maqaallo Aynu caawinno walaalkeen Weriye Khadar Macallin Deeq
“Dalka gudihiisa waxba lagama qaban karo” – Hadal aan aad uga murugoodo.
Markale ayeynu Insha-allah ka wada sheekaysan doonaa hadalkaasiye, aynnu caawinno walaalkeen, Weriye Khadar Macallin Deeq Oo muddooyinkii u danbaysay xanuusanaya.
Dalka gudihiisana waxba looga qaban kari waayey.
Alleenkiisa gacanta (Tilifoonkiisa gacantu) waa:
Zaad: +252 63 4249939
E. Dahab: +2524249939
Haddii keliya, 5000 kun oo inaga mid ahi midkastaa u diro 5 dollar ama 42,000 Somaliland Shillin, waxay noqonaysaa (5 dollar * 5,000 oo qof=$25,000) Shan iyo labaatan kun oo dollar. Ama (42,000SL* 5,000 oo qof=210,000,000 SLSH) Laba boqol iyo toban milyan oo Shillinka Somaliland ah. Maxaad fili lahayd intaasi inka badanna? Dabcan inka badan intan.
Qaarkeen, 5 dollar iyo wax ka badanba waxaynu ku bixinnaa waxyaabo ka mid ah nolol maalmeedkeenna. Maanta se’ walaalkeenbaa inooga baahi badan.
Waxan rajaynayaa inay farriintaydani ku soo gaadhay, haddaad Weriye ama wadaad tahay. Haddaad Qurbe-Joog ama Qol-Qol joog tahay, haddaad Ganacsade ama gadhwadeen tahay, Haddaad Shirkad ama saamilay tahay. Haddaad loo shaqeeye ama shaqaale tahay. Haddaad Bare ama ardaygiisa tahay Fadlan;